China mgbochi ịka nká 11 ahịrị HIFU emepụta na suppliers | MENOBeauty
Mmetụta ngwa ngwa maka mgbochi ịka nká wrinkles iwepụ HIFU usoro
Ahịrị 11 ahọpụtara Patented Technology mbụ na-emepụta ihe
● China mbụ Original Manufacturer
● 11 ahịrị HIFU Patent Nke ZL2015 2 0088495.8
● Menobeauty enyela ọtụtụ ahaziri OEM ebe ọ bụ na 2014, HIFU cartridges ngụkọta ahịrị nwere ike ịbụ 10000 gbaa, 20000 gbaa, 25000 gbaa, 26000 gbaa dabere na gị ahịa.
Na-abụghị nke ogwugwo akpụkpọ eweli aghọwo otu n'ime ndị kasị chọọ ọgwụgwọ na HIFU bụ ọhụrụ na-abụghị nke ogwugwo technology ka mma na mpaghara ebe a naanị otu nnọkọ! Ọ zaa iche iche Brow eweli, Jowl akara eweli, Nasolabial n'ogige atụrụ Mbelata, Periorbital ndọlị Mbelata na mkpokọta Skin tightening, rejuvenation na dum ahu slimming.
Meno HIFU na-eji teknụzụ Ultrasound elebara anya siri ike, nke mere na anụ ahụ na-emepụta ihe ọkụ ahụ, ma mee ka sel na-agba ọsọ ọsọ iji kpalite collagen mmetụta dị ọkụ a agaghị emerụ epidermis ahụ, n'ihi na ọgwụgwọ ahụ ọsọ ọsọ ma nweta ohere ịbanye na saịtị ọgwụgwọ ahụ n'ime 0 -0.5 sekọnd, na-enweghị imetụ anụ ahụ gbara ya gburugburu aka ma nwee ike ịfefe ya na usoro akwara anụ ahụ kachasị elu (SMAS).
Enwere ike ime igwe HIFU siri ike mgbe ọ na-adọta akwara ahụ, ihu dị nro ruo mmetụta na-aga n'ihu. Gịnị bụ SMAS? Ọrụ ndị na-awa ahụ ugbu a site n'aka ndị dọkịta na-awa plastik na-arụ ọrụ oyi akwa, akwa oyi akwa SMAS, nke bụ (usoro musculoaponeurotic dị elu, nke a na-akpọ ntụpọ fascia na omimi anụ ahụ bụ ihe dị ka 4.5mm, abụba subcutaneous na akwara.
Nke gara aga: 100% Ngwongwo ihe eji edozi 11 ahịrị HIFU maka ihu & ahụ
Osote: Hifu mkpuru ahihia